CLAMS စျေး - အွန်လိုင်း CLAM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CLAMS (CLAM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CLAMS (CLAM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CLAMS ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 617 735.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CLAMS တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CLAMS များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CLAMSCLAM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.22CLAMSCLAM သို့ ယူရိုEUR€1.03CLAMSCLAM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.931CLAMSCLAM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.11CLAMSCLAM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr10.99CLAMSCLAM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.7.68CLAMSCLAM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč27.13CLAMSCLAM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł4.55CLAMSCLAM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.63CLAMSCLAM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.69CLAMSCLAM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$27.4CLAMSCLAM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$9.49CLAMSCLAM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$6.55CLAMSCLAM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹91.75CLAMSCLAM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.206.43CLAMSCLAM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.68CLAMSCLAM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.83CLAMSCLAM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿38.08CLAMSCLAM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥8.51CLAMSCLAM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥129.19CLAMSCLAM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1449.83CLAMSCLAM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦465.73CLAMSCLAM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽89.81CLAMSCLAM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴33.92
CLAMSCLAM သို့ BitcoinBTC0.000103 CLAMSCLAM သို့ EthereumETH0.00308 CLAMSCLAM သို့ LitecoinLTC0.0204 CLAMSCLAM သို့ DigitalCashDASH0.0119 CLAMSCLAM သို့ MoneroXMR0.013 CLAMSCLAM သို့ NxtNXT86.73 CLAMSCLAM သို့ Ethereum ClassicETC0.17 CLAMSCLAM သို့ DogecoinDOGE341.7 CLAMSCLAM သို့ ZCashZEC0.0124 CLAMSCLAM သို့ BitsharesBTS46.7 CLAMSCLAM သို့ DigiByteDGB44.69 CLAMSCLAM သို့ RippleXRP3.97 CLAMSCLAM သို့ BitcoinDarkBTCD0.0411 CLAMSCLAM သို့ PeerCoinPPC4.31 CLAMSCLAM သို့ CraigsCoinCRAIG543.12 CLAMSCLAM သို့ BitstakeXBS50.83 CLAMSCLAM သို့ PayCoinXPY20.81 CLAMSCLAM သို့ ProsperCoinPRC149.58 CLAMSCLAM သို့ YbCoinYBC0.000641 CLAMSCLAM သို့ DarkKushDANK382.2 CLAMSCLAM သို့ GiveCoinGIVE2577.44 CLAMSCLAM သို့ KoboCoinKOBO267.78 CLAMSCLAM သို့ DarkTokenDT1.13 CLAMSCLAM သို့ CETUS CoinCETI3439.79